Top Software 5 iPhone kaabta 2015
Top 5 iPhone Softwares kaabta 2015
Hands haddii aadan aad ula socon karto la taxanaha ah ee casriga ah sida dareemi u bilawday sannad kasta! Iyadoo casriga ah ee aad iska leedahay, waxaad tahay aamin farsamada qalabka laf iyo ku dhawaad ​​ururiyaha ah oo cayn kasta. Waxaa had iyo jeer xiiso leh oo isku dayaya qalabka technology cusub, laakiin waxa ugu yar ee aad u sugaynaa in uu yahay taageero aad smartphone jir si aad u soo kaban karto xogta muhiimka ah aad mid cusub.
Si lagaaga caawiyo in aad dhibaatadaas ka gudubto, halkan waxaa ku qoran liiska Top 5 iPhone Software ee kaabta 2015.
Sida ay magaceeda soo jeedisay, cajiibka ah gurmad iPhone software waa halkii awood badan. In interface hal, waxaad awoodi doontaa inaad dib u aad iPhone iyo wareejiyo dhammaan xogta ku saabsan casriga cusub la hal ama laba qasabno. Xataa waxaad ka dhigan kartaa file u gurmad in your computer hore haddii aadan haysan qalab cusub si ay ku kaydi!
MobileTrans waa gurmad xogta iyo software kala iibsiga ee ay Wondershare. Waxaa aad u ogolaanaya in ay xog gurmad oo ay kala soo wareegeen qalab kala duwan oo hal click. Software karo noocyada macluumaadka si fudud gurmad iyo kala iibsiga sida xiriirada, fariimaha qoraalka ah, audio, video, jadwalka taariikhda, barnaamijyadooda, sawiro iyo Guda yeedha. Waa dhamaystiran oo khatar la'aan iyo qaadataa daryeelka gaarka ah. Waxa ay taageertaa nidaamyada hawlgalka kala duwan. Halkan waxa ku jira qaababka ugu muhiimsan ee MobileTrans:
Software wuxuu taageeraa Android, macruufka, iyo Nokia Symbian. Waxaa la og yahay in ay ka shaqeeyaan in ka badan 3000 casriga ah ka badan shabakadaha kala duwan.
Isticmaalka software waxa aad dib kartaa ilaa aad content iyo soo celin tayada asalka.
Haddii aad rabto in aad masixi xogta phone-qabadka ama iibin sababaha, isticmaal uun software iyo telefoonka noqon doonaa dib in goobaha warshad.
Isticmaalka software ah waa wax fudud oo qaadataa ilbiriqsi yar ay sabab u tahay interface dareen leh.
Faa'iido: Sida ay magaceeda soo jeedisay, cajiibka ah gurmad iPhone software waa halkii awood badan. In interface hal, waxaad awoodi doontaa inaad dib u aad iPhone iyo wareejiyo dhammaan xogta ku saabsan casriga cusub la hal ama laba qasabno. Xataa waxaad ka dhigan kartaa file u gurmad in your computer hore haddii aadan haysan qalab cusub si ay ku kaydi!
Qasaarooyinka: nooc file gaar ah uma wareegi karo guud ahaan nidaamyada hawlgalka kala duwan tusaale ahaan Guda call iyo waxyaabaha jadwalka.
The "kaabta Smart" feature on software waa weyn yahay - waxa keliya oo u baahan tahay mid ka mid riix si aad xog gurmad (tusaale metadata, videos, music, sawiro, iwm) aad iPhone. Files ee kaabta ku kaydsan yihiin iyo maamulo isticmaalaya Lugood. Waxa kale oo ay tahay qabow ku saabsan habkaani waa in aad ku dhamaan doonaan ilaa leh files nuqul. Intaa waxaa dheer, waxaad dooran kartaa in la isticmaalo "kaabta Buugga" muujinta ah in kuu ogolaanayaa inaad qaadato oo aad doorato oo xogta aad rabto in aad gurmad.
Faa'iido: awoodaan in ay gurmad files iPhone ugu (ie music, videos iyo filimada, barnaamijyadooda, PDFs, buugaagta, podcasts, playlists, ratings iwm), waxay bixisaa Talooyin iyo tabaha la isticmaalo software ah, ammaan ah oo xasilloon, oo xor ka ah ad, basaas ama furin, la jaan qaada dhammaan qalabka Apple, iyo sidoo kale loogu tala galay in ay ka shaqeeyaan Windows 10, 8, 7, Vista iyo XP.
Qasaarooyinka: kaliya la jaan qaada qalabka macruufka, ma taageeri image files iyo qaadataa waqti dheer taageerto kor u files marka la barbar dhigo software kale.
iPhone Software ee kaabta, Cucusoft
Iyadoo software tan, waxaad awoodi doontaa inaad dib u up ka kooban oo idinka mid ah iPhone si Mac ama PC oo aan laga badinin wixii xog ah. Its interface ma-buunbuuninayo wax fudud in gurmad xiriirada, Daashboodh, music, videos, qoraalo, sawiro, iwm kasta file gurmad waxa lagu kaydiyaa sida faylasha Lugood ah.
Faa'iido: la socon kara iPhone ka weyn (oo ay ku jiraan iPhone 5, iPhone 4s, 4, 3GS, 3G iyo 2G), ay awoodaan in ay gurmad dhammaan faylasha iyo xogta aad iPhone, runtii fududahay in la isticmaalo iyo interface fudud.
Qasaarooyinka: ma jirto version lacag la'aan ah dadka isticmaala Mac, u nugul aqoonsan waayay iPhone xiran ee isku dayga koowaad hana fududeeyo dib u soo celinta.
Qalab kale oo bixiya gurmad sahlo in dadka isticmaala iPhone waa SynciOS ah. Software Tani caawinaysa dadka ka iPhone 3GS, iPhone 4, ilaa model ah iPhone dambeeyay. Waxaa sidoo kale la dhisay la sahlo user ku hay; habka gurmad ah lagu samayn karaa iyada oo aan baahida loo qabo in isticmaali Lugood mana iCloud. Ma note, si kastaba ha ahaatee, Lugood u baahan tahay in lagu xiro on your computer, xataa haddii aadan u isticmaalin inta lagu guda jiro habka fiirsato aad.
Faa'iido: awoodaan in ay gurmad ku dhawaad ​​xogta walba (oo ay ku jiraan goobaha hore) iyo faylasha ka iPhone, kaban karto faylasha iyo xogta gurmad u ah iPhone, la jaan qaada dhamaan nidaamyada, iyo sidoo kale maamuli lahaayeen barnaamijyadooda iyo wareejiyo eBooks dhexeeya dhufto ee kala duwan.
Khasaaraha: Waxay ku taageeraan qalab macruufka oo kaliya iyo khasaare kale oo la software tani waa in ay qaadan doontaa waqti dheer si ay u gudbiyaan haddii aad leedahay liis dheer oo files in lagu wareejiyo.
Software A waa awood in ay gurmad ah oo dhab ah si aad u iPhone, sandal AnyTrans 'waa in awoodda ay Falanqeynta; jidaynayey users xitaa iyada oo files ka hor taageerto kor u files oo la soo doortay oo ka mid ah doorashada. Tani fududahay in la isticmaalo software Macdan karo xogta ka ah iCloud, Lugood ama gurmad computer. Intaa waxaa dheer, dadka isticmaala ayaa sidoo kale si ay u qabtaan xogta suuqa kala iibsiga u dhaxeeya kombiyuutarada, macruufka qalabka iyo laftiisa Lugood awoodaan.
Faa'iido: gurmad awoodo iyo dhoofinta files kala duwan (tusaale, qoraalka, qoraalada, xogta app, wac taariikhda, xiriirada iyo qaar badan) iyo interface waa u fududahay in ay maraan.
Qasaarooyinka: super qaali ah, (by default, kuu diyaarin doona heesaha oo sida ay taariikhda aad badbaadin file maqal ah aad iPhone) doonaa isku ciyaartid aad playlist, waxyaabaha warbaahinta-hodan sida videos iyo sawirada aan la previewed karaa ka hor habka fiirsato, xidhiidh ka dhexeeya computer iyo iPhone laga yaabaa kala gooyey oo aad u baahan doontaa in geeddi-socodka oo dhan ka bilaabi si joogta ah, waxay abuurtaa fayl oo ka mid ah files gurmad hab jacburka ah, iyo waqti dheer qaata si ay u abuuraan file gurmad ah.
> Resource > iPhone > Top 5 iPhone Softwares kaabta 2015